किन रोकियो 'भद्रगोल'को प्रसारण ?
काठमाडौं- नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने हास्य टेलिसिरियल 'भद्रगोल' अबदेखि तपाईंको टेलिभिजनको पर्दामा नदेखिने भएको छ ।
भद्रगोलका एक निर्देशक अर्जुन घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एउटा लामो स्टाटस लेख्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
'दुर्भाग्यको कुरो भद्रगोलको नाम,डिजाइन ,लेखन,निर्माण,निर्देशन गर्ने हामी सर्जकहरूसँग भद्रगोल नामको अधिकार छैन । एउटा सर्जकले सिर्जना गरेको सम्पूर्ण अधिकार सर्जकमै हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर पहल गर्‍यौं तर अधिकार पाउन सकेनौं,' उनले लेखेका छन्, 'आजको दिनमा न हामीले भद्रगोल नाम राखेर टेलिसिरियल निर्माण गर्न सक्छौं न काम गरिरहेकै संस्थासँग काम गर्ने वातावरण छ । यो अवस्थामा हाम्रो टीमले के गर्दा ठिक हुन्छ ? भगवानरूपी दर्शकहरूको अमूल्य सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछौं ।'